'दुस्साहसले पुरस्कार दिलायो'
अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, श्रावण २३, २०७३
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पबाट बँच्न भाग्दै गरेका मानिसका तस्वीरबाट फोटो पत्रकार क्लब आयोजित 'आईएमई–ग्लोबल–आईएमई फोटो अफ दि इयर २०७३' को उपाधि जितेका टेबहाल, काठमाडौंका दीपकरत्न बज्राचार्य (३५) भन्छन्, “सोखले जिताएको पुरस्कारबाट दंग छु।”
६ हजार ६७० फोटोबाट उत्कृष्ट हुँदै रु.१ लाख पुरस्कार पाउँदा कस्तो लागेको छ?
धेरै खुशी छु। यसकारण पनि कि म पेशाले फोटो पत्रकार होइन। फोटोग्राफी मेरो रुचि मात्र हो।
प्रथम भएको फोटो कसरी खिच्नुभयो?
गत वर्ष १२ वैशाख शनिबारको दिन परिवारसहित म स्वयम्भू गएको थिएँ। पूजा सिध्याएर फोटो खिचिरहेका बेला अचानक भूकम्प आयो। भागदौड मच्चियो। मसँग ७ वर्षका भान्जा थिए। एक हातले भान्जालाई समातें। र, अर्को हातले फोटो खिच्दै भागें। त्यहीबेला खिचेको एउटा फोटो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएको हो।
न्यूरोडको संकटा मन्दिरको पुजारी मान्छे, फोटोप्रतिको आकर्षण कसरी बढ्यो?
मेरा केही साथीहरु व्यावसायिक फोटोग्राफर छन्, केही पत्रकार पनि छन्। उनीहरुले खिचेका, पत्रिकामा छपाएका फोटो हेर्दा कुनै दिन म पनि यस्तै फोटो खिच्छु जस्तो लाग्थ्यो। उनीहरुकै संगतले फोटोप्रति आकर्षित भएको हुँ।
प्रतियोगिताबारेको सूचना चाहिं कसरी पाउनुभयो?
गत वर्षका प्रतियोगितामा विजयी तस्वीरहरु समाचारमा हेरेको थिएँ। यसपालि पनि प्रतियोगिता हुँदैछ भनेर साथीहरुले सुनाए। भूकम्प मेरा लागि अविस्मरणीय क्षण थियो। त्यही क्षणमा खिचेको तस्वीर पठाउने विचार गरें। यो एकप्रकारले दुस्साहस नै थियो।
पुजारी पेशा छाडेर फोटो पत्रकारितामा आउनेबारे केही सोच्नुभएको छ?
फोटो पत्रकारिता गर्ने मेरो सोच छैन। यो मेरो रुचि मात्र हो। फोटो खिच्नकै लागि म वर्षेनि पदयात्रामा निस्कन्छु। देशका सबै रमणीय ठाउँ पुगी फोटो खिच्ने इच्छा छ। पुरस्कारले ऊर्जा थपेको छ।